Kọmitii Iwu mmalite SA na Ramaphosa
N’izu a, Ọfịs Onye isi ala nwere nzukọ pụrụ iche ya na ndị mmadụ sitere na otu dị iche iche na -etinye ego na uto na nkwado nke ndị ọchụnta ego na azụmaahịa obodo iji kwurịta ihe dị mkpa iji kpochapụ teepu uhie na -egbochi uto nke obere ụlọ ọrụ.
Ụfọdụ n’ime ha bụ ndị nnọchiteanya sitere na kọmitii na-ahụ maka mmalite Iwu South Africa. Kọmiti a nwere ndị nnọchi anya AfricaArena, Digital Collective Africa, Endeavor South Africa, i4Policy, Loudhailer, Southern African Venture Capital and Private Equity Association (SAVCA), Silicon Cape, SiMODiSA, na Wesgro.
Onye isi ala Cyril Ramaphosa kwuru, "N'ihe gbasara iwu mmalite South Africa, ọ ga-amasị m ka anyị tụlee nke ahụ ... Ọ bụrụ na anyị na-eche maka ịkwalite ịzụ ahịa, anyị kwesịrị iche echiche banyere otu anyị si akwalite ọrụ mmalite."
Matsi Modise, onye guzobere na onye na-etinye ego na Furaha Afrika Holdings, osote onye isi oche nke SiMODiSA, na onye isi oche nke Kọmitii Na-ahụ Maka Ọrụ Malite SA, gosiri Onye isi ala na ọ nweghị oge ka mma ugbu a maka South Africa ịhazigharị onwe ya ọzọ. ọnụ ụzọ maka mmetụta dị elu, ịzụ ahịa teknụzụ dị elu na kọntinent ahụ.
O kwuru na South Africa na -efunahụ ọtụtụ ndị ọchụnta ego nwere nkà n'ihi usoro ihe mgbe ochie na usoro nkwarụ.
“Ka South Africa bụrụ ebe mara mma maka ndị na-etinye ego, ndị nwere nkà na ndị ọchụnta ego, anyị ga-etinyerịrị iwu mmalite nke ga-abụ ụzọ niile South Africa ga-abụ mba mmalite Africa. “
A kpọrọ ndị nnọchi anya si na Kọmitii Na -ahụ Maka Ọrụ Malite SA ka ha bịa nnọkọ ahụ iji kpaa maka atumatu na atụmatụ dị mkpa iji wepụta mgbanwe na uto azụmaahịa. N'oge mkparịta ụka ahụ, ọtụtụ nsogbu ịma aka pụtara dị ka isiokwu a na -ahụkarị.
Ndị a gụnyere mgbagwoju anya nhazi, ụkpụrụ ọrụ, oghere ego dị oke mkpa na enweghị ego dị ọnụ ala, yana enweghị ike ịnweta ego n'ihi enweghị nhazi, ndekọ ndekọ egosipụtara na nkwekọrịta ma ọ bụ akụkọ kredit dị njọ.
Ekwupụtakwara na a na-ekwusi ike na nkwado ụlọ ọrụ n'ozuzu karịa nkwado ngalaba na njikọ ahịa.
Tanya van Lill, onye isi SAVCA kwuru, “Ndị na -ahụ maka ego isi obodo anyị na -enweta nkatọ dị ukwuu na ha anaghị etinye ego na azụmaahịa zuru oke ma ọ bụ ndị ọchụnta ego, mana nke bụ eziokwu bụ na enweghị ndị njikwa ego VC zuru oke na South Africa nwere nnukwu ego zuru oke iji tinye ego. achọrọ na itinye ego n'ọtụtụ ndị ọchụnta ego na -achọ ego.
Otu nnukwu ihe ịma aka ha na -ehota, bụ na ha na -alụ ọgụ ịkwado onwe ha - yabụ ọbụlagodi ụlọ ọrụ Venture Capital na -alụ ọgụ ịkwado ego.
Ugbu a, ndị na -etinye ego n'ime ndị na -ahụ maka itinye ego na Venture Capital bụ ndị nwere ọnụ ahịa dị elu, ụlọ ọrụ ezinụlọ na ụfọdụ ụlọ ọrụ yana SA SME Fund nke rụrụ ọrụ dị mkpa dị ka onye na -etinye ego na ụlọ ọrụ VC. Agbanyeghị, enweghị isi ụlọ ọrụ ọ bụla na -abanye na ụlọ ọrụ VC ugbu a. ”
A tụpụtara mmemme maka imepụta ọnọdụ na -enyere aka, itinye ego na ihe mkpali, guzobe ọkwa egwuregwu dị larịị na ịmepụta mmemme itinye aka dijitalụ maka SA.
Otu isi okwu si na nzukọ a pụta bụ mkpa ịkwalite gburugburu ebe obibi dị egwu maka mmalite. Nke a na -achọ idozi nsogbu na usoro mgbochi, yana nkwado ụlọ ọrụ na ego.
N'okwu ikpeazụ a, a tụlere na a ga-emepụta ụdị ego ọhụrụ na nke ọhụrụ, gụnyere ego ga-esi na ya pụta na ego mmalite.
Ndị bịaranụ nwere nkwekọrịta na South Africa kwesịrị iguzobe onwe ya dị ka ebe isi ụlọ ọrụ achụmnta ego na ọnụ ụzọ nke kọntinent ahụ.
Enwekwara nkwekọrịta na ụzọ imekọ ihe ọnụ ga -adị oke mkpa maka ime ka njikọ dị n'etiti gọọmentị na otu dị na mpaghara na maka imekọ ihe ọnụ.
Ndị na -enyere aka ndị ọzọ dị mkpa nyochara gụnyere ịzụlite nka na dijitalụ na teknụzụ, na -ekwu maka ịkwụ ụgwọ SMME n'oge na -adịghị anya site na usoro ịzụta ego ịtụ ahịa, yana ịlụso ihe ndị ọzọ na -akpata ọdịda azụmahịa ọgụ.
Site na iwu mmalite SA nwere ike bụrụ onye na -enyere aka ọzọ, Alison Collier, Endeavor South Africa Onye isi nchịkwa kọwara nkọwa mmezigharị amụma a kọwara nke ọma n'akwụkwọ iwu.
“E nwere mmezi iwu anọ dị mkpa anyị na -atụ aro maka mmalite tozuru etozu nke ga -emegharị ihe dịka 80% nke mgbanwe ahụ.
Ndị a na-agụnye nkwụsịtụ ụtụ isi na ihe mkpali maka ndị na-etinye ego iji hụ na ọchịchị ụtụ isi nke SA na-eme ka anyị mara mma maka ndị na-etinye ego VC nke mba ọzọ gbasara ebe mmalite mmalite zuru ụwa ọnụ, ọkwa BBEEE na-akpaghị aka, na-abawanye ohere ịnweta nkà nwere nkà site n'ikwe ka ọnụ ọgụgụ dị nta nke visa maka ndị mba ọzọ nwere nkà. mba kwa mmalite kwa afọ, na akpaaka mgbanwe akara nkwado maka IP nyefe yana mgbaghara si ugbu a na n'ọdịnihu mgbanwe mgbanwe akara omume maka itinye ego n'ime iru eru mmalite.
Akụkụ na-akpali akpali bụ na ọ ga-ekwe omume imezu ihe ndị a n'ime obere oge na ihu ya dị ukwuu - ma maka ịmepụta ọrụ na uru nke fiscus. "
Onye bụbu Wesgro CEO na Digital Collective Africa Board, Tim Harris kwukwara, “Enwere ngwa ngwa na mmejuputa atụmatụ ndị a ugbu a n'ihi na ndị ndu teknụzụ South Africa na mpaghara Afrịka nọ n'ihe egwu, ọbụlagodi ka ụwa na -eteta n'ụra ahịa.
Anọ m na Europe n'izu gara aga na otu ndị na -eto eto ndị ọchụnta ego nke teknụzụ Africa, o dokwara anya na ike na -aga Kenya na Nigeria. Anyị na -efunahụ asọmpi anyị na kọntinent ahụ.
"Mana anyị ka nwere ahịa isi obodo kacha dị omimi na Africa, yabụ anyị kwesịrị iweghachite usoro ụtụ isi 12J iji mejupụta isi obodo a n'ime isi ego ma nweta ndị ọchụnta ego anyị.
Na mgbakwunye, anyị ka nwere ohere iji dọta nka na SA n'ihi na ndị nwere amamihe na kọntinent na gburugburu ụwa ka na -achọ ịbịa ebe a, yabụ anyị kwesịrị ịtọhapụ mbata na ọpụpụ iji hụ na ndị kacha mma na ndị na -enwu enwu na -akwaga ebe a iji mee ka ngalaba teknụzụ anyị dị ike. .
N'ikpeazụ, ntọala ụlọ ọrụ anyị na akụrụngwa ka bụ nke kachasị ike na kọntinent nke pụtara na anyị nwere ike dọta, zụlite ma too ụlọ ọrụ IP na-akwalite na ngalaba teknụzụ.
Ọ bụ ihe nwute, njikwa mgbanwe mgbanwe nke oge Apartheid na-amachi oke mkpali ime nke a, kama na-akpali ndị mbido SA ka ha tinye ebe ọzọ n'ihi na a na-ewere IP dị ka isi obodo, yabụ iwu IP anyị na-egbochi ya. Anyị kwesịrị ịkwụsị njikwa njikwa iji gosi na SA mepere emepe maka azụmahịa. ”